← वडा दशैंको शुभकामना !!!	आजको सन्दर्भमा पुराना चाड-पर्वको महत्व →	अग्रगमनका लागी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार	02
एक (जना पश्चिमा) विश्लेषकले भनेका थिए, कुनैपनि सत्यले मुलतः तिन चरण पार गर्नुपर्दछ । शुरुमा यसको खिल्ली उडाईन्छ, त्यसपछि यसको तिव्र विरोध तथा प्रतिकार गरिन्छ र, अन्तमा सर्वस्विकार्य रुपमा यसलाई अपनाईन्छ । नेपाली राजनितीमा पनि यस्ता परिदृश्यहरु पटक पटक देखिईरहेका छन् विशेषतः मुलुकमा एक दशक लामो जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टि एनेकपा माओवादीका सम्वन्धमा यो वढि नै लागु भएको पाईन्छ । शुरुमा माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा यसको खिल्ली उडाउने स्वघोषित विद्धतवर्गहरु धेरै थिए, त्यसपछि यसलाई दमन गरेर सिध्याउंछु भन्दै अनेकौं नामधारि कारवाही (अपरेशन) हरु गरियो, नेताका टाउकाका मोल तोकियो तर यो रोकिएन, झनै छलाङ मार्दै गयो र आखिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत विरोधीहरु सवैले स्विकार गर्नैपर्ने रुपमा संविधान सभाको निर्वाचनवाट पहिलो ठुलो दलको आकार ग्रहण गर्नसक्यो । चुनाव जितेको चार महिना वितिसक्दापनि माओवादीलाई सरकार गठन गर्न दिईएन, सरकार गठन भएपछि पनि चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर नौ महिना वित्न नपाउंदै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरियो । यस लगत्तै मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिगामी हर्कतहरू मौलाउंदै गएका छन् । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च निकाय संसदमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिने कांग्रेस एमाले गठवन्धनको रवैयाले सदनलाई नयां जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने थलो बनाएर अग्रमनतिर लैजाने भन्दापनि पुरानै संसदीय व्यवस्थामा कैद गरेर प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसरि, अहिले उनिहरु यो वा त्यो नाममा मुलुकमा सैन्यवाद लाद्न या उन्मुलन भईसकेको राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गराउने षडयन्त्रमा लाग्न थालेका छन् । त्यसो त, माओवादी नेतृत्वको सरकारले वर्खास्त गरेका नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई थमौति गर्न भारतीय विस्तारवादको ईशारामा गठित वर्तमान सरकारले त्यस लगायत सेनाका आठ जना जर्नेलहरुको म्याद थप्नेदेखी भारतवाट सैन्य सहायताका नाममा हतियार भित्र्याउने सम्मका कामहरु सफलतापुर्वक फत्ते गरिसकेको छ । त्यतिमात्र नभई माकुने नेतृत्वको यस वुख्यांचा सरकारले सीमा क्षेत्रका हजारौं हेक्टर जमीन भारतीय विस्तारवादसामु समर्पण पनि गरिसकेको छ ।
← वडा दशैंको शुभकामना !!!	आजको सन्दर्भमा पुराना चाड-पर्वको महत्व →	4 responses to “अग्रगमनका लागी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार”	circle	अक्टोबर 3, 2009 at 3:19 बिहान	संसद र सरकार भनेको हरुवा चरुवाहरुको दाई गर्ने थलो होईन । देश कुनै कठपुतली या हिजडा सरकारको निर्देशनमा चलाउने चिज होईन, विधि र विधान अनुरुप चल्ने हुनुपर्दछ । तसर्थ, राष्ट्रिय संकटको निकास, अग्रगामी नयां संविधान निर्माण तथा राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षणको लागी मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनु जरुरि छ ।
घोषणा राउत	अक्टोबर 3, 2009 at 3:24 बिहान	………………. तपाईंले गर्नु/नगर्नु गरिहाल्नुभयो, तर अझै पनि जनताको नजरमा माथि उठ्ने प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं । अब पदलाई दाउमा राख्नूस् । तपाईं प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो । तपाईं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा पुगिहाल्नुभयो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले पाउने सुविधा पाइहाल्नुहुन्छ । तपाईंले कुनै पनि हालतमा नपाउने पद पाइहाल्नुभयो । कांग्रेसको गुन मानिहाल्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाकरी पनि गर्नुभयो । पछाडिको ढोकाबाट फर्काइ पनि पाउनुभयो । इज्जत र बेइज्जत पर्याप्त देख्नुभयो । प्रधानमन्त्री भएर भारत र अमेरिका पुग्नुभयो । बाराक ओबामालाई पनि भेट्नुभयो नै होला । यौटा साधारण नेपालीको छोराले देख्ने सपना पूरा गरिसक्नुभएको छ, तपाईंले । अब तपाईंलाई त्यो पद काम छैन । त्यसैले त्यसलाई दाउमा राख्नूस् । यसै पनि त्यो पद सधैँ रहने होइन । अब संकल्प-प्रस्तावलाई तुरुन्तै ल्याउनूस् । कांग्रेसले जति विरोध गरे पनि त्यसलाई संसद्मा ल्याउनुहोस् । तपाइर्ंकै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले भनिरहेका कुरा मनन गर्नुहोस् । तपाईं खड्ग ओलीको पछि नलाग्नूस्, आफ्नै पार्टीका नेता भए पनि । खड्ग ओलीले तपाईंलाई खत्तम पार्छन् । उनले जसरी तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुर्‍याए, त्यत्तिकै तल गिराउन पनि सक्छन् । आफ्ना अध्यक्ष र महासचिवले भनेका कुरालाई आडमा राखेर संकल्प-प्रस्ताव संसद्मा भित्र्याउन दिनुहोस् । त्यसपछि राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्छ । हामी जनता यो गाँठो फुकाउन चाहन्छौँ । हामीलाई नयाँ संविधान लेख्नुपरेको छ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपरेको छ । माधवजी, तपाईंले माओवादीलाई दिनुसम्म धोका दिनुभयो । अब कम्तीमा पनि राष्ट्रलाई त धोका नदिनुहोस् । नयाँ संविधान समयमा नलेख्नु भनेको राष्ट्रलाई धोका दिनु हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा मरेका, अंगभंग भएका र दुःखकष्ट पाएका हजारौँ नेपालीहरूको अनुहार सम्झिएर संकल्प-प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । आफ्ना पुराना गल्तीलाई सुधार्ने ठूलो अवसर हो यो । संकल्प-प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने तपाईंले जनताबाट वाहवाही पाउनुहुनेछ । तपाईंको गिरेको प्रतिष्ठा केही हदसम्म माथि पुग्नेछ । भावी निर्वाचनमा तपाईंलाई अवश्य फाइदा हुनेछ । ……..
alone	अक्टोबर 3, 2009 at 4:06 बिहान	अव त नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा पनि पुरानो भइसकेन र ?
Nepali Mundre	अक्टोबर 3, 2009 at 2:21 बेलुका	aaaaa yo nagarik sarvochhata bhanne shabda le pani dikka pari sakyo bhaneko. aba ta yo mudda purano bhai halyo ni, maoist le ta yo mudda chhodna lagisakeko chha.